Sida loo dhoofiyo Notes ka iPhone, iPad iyo iPod Touch in Computer
> Resource > iPhone > Sida loo dhoofiyo Notes ka iPhone, iPad iyo iPod xiriiri in Computer
Your iPhone, iPad, iPod Touch ama heysta taariikhda note oo dhan in ay app Notes. Waxa ay noqon doontaa wax nasiib u si qalad ah waxaad waayi qalab aad oo ay leeyihiin dhammaan qoraalada qaadan tirtiray. Sidaa darteed, si joogta ah taageero aad qoraalada ku iPhone, iPad ama iPod taabto waa lagama maarmaan. Sidaas, aan ka hadalno sida loo dhoofin iPhone, iPad ama iPod taaban qoraalada si aad u computer u gurmad.
Sida loo dhoofin qoraalo ka iPhone, iPad ama iPod taabto si computer
Dhab ahaantii, Lugood kaa caawin karaan in ay dib u kor xogta ah iPhone, iPad ama iPod taabto marka aad u hagaagsan u leh. The dhibic xun yahay in gurmad Lugood ee file waa nooc ka mid ah Sqlitedb file, kaasoo aan u oggolaanayn in aad aragto ama ay u helaan tusmada waxaa ka mid ah. Dheeraad ah oo dheeraad ah, file gurmad ah la cusbooneysiin doonaa mar kasta oo marka aad u hagaagsan qalab aad, iyo aad waayi doonaa xogta hore ka dib markii u hagaagsan. Si aad u dhoofiyaan qoraalada iPhone aad, aad u baahan tahay barnaamijka kale ee cid saddexaad.
Halkan waa talo: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) (cusub oo ay taageerayaan macruufka 9), kaas oo kuu ogolaanaya in aad si toos ah iskaan iyo qoraalada dhoofinta ka iPhone, iPad iyo iPod xiriiri si aad u computer sida file ah HTML akhrin karo. Oo weliba aad, dhoofin karto macluumaad kale oo ku saabsan qalab aad, aad, sida sawiro, videos, xiriirada, fariimaha, iwm on Akhri oo raac tallaabooyinka hoose si aad u dhoofiyaan xogta aad.
Download version maxkamad hoose in ay isku dayaan oo bilaash ah!
Talaabada 1: Burcad barnaamijka iyo xiro qalabka aad
First of dhan, abuurtaan Dr.Fone on your computer ka dib markii la rakibey, iyo xiriiriyaan iPhone, iPad ama iPod taabto. Marka aad qalab la ogaado, waxaad heli doontaa interface hoose.
Wixii iPhone 6S / 6S Plus / 6 Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4s, iPad la isha bandhigay, iPad mini, iPad cusub Pro, iPad iyo iPod 2 xiriiri 5 users:
Wixii iPhone 4 / 3GS, iPad iyo iPod 1 xiriiri 4 users: Waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo ka siib-in u qalab aad halkan.
Talaabada 2: Sawirka qalab aad
Hadda, aad si toos ah u riixi kartaa Start Scan on suuqa kala barnaamijka si scan 6s iPhone aad (Plus) / 6 (Plus) / 5C / 5S / 5 / 4s, iPad bandhigay isha, iPad mini, iPad cusub, iPad 2 , iPad iyo iPod Air taaban 5.
Haddii aad isticmaasho iPhone 4 / 3GS, iPad 1 ama iPod xiriiri 5, raac tilmaan-hoose si aad u hesho hab iskaanka si ay u iskaan:
Ku hay qalabka iyo guji badhanka Start.
Qabo badhamada Power oo Home waqti isku mid ah si degdeg ah ka dib markii tallaabo ka mid ah, ee saxda ah 10 ilbiriqsi.
10 ilbiriqsi ka dib, sii daayo batoonka Laakiinse ay xajiyaan button Home 10 ilbiriqsi kale ku cidhiidhinaya ilaa aad u sheegay in aad si guul leh ku soo gashay hab iskaanka ah.
Ka dib markii in, Wondershare Dr.Fone bilaabi doonaa baar qalab aad xogta ku yaal.
Talaabada 3: qoraalada dhoofinta on iPhone, iPad ama iPod taabashada
Marka sawirka dhameystiray, dhammaan xogta ku saabsan qalab aad ah loo baadho doonaa oo soo bandhigay qaybaha, ma aha oo kaliya qoraalada, sida xiriirada, fariimaha, camera oo duudduuban, iwm Waxaad mid kale ka dib ku eegaan kartaa xusuusqor kuu hor dhoofinta. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto oo guji bogsii, oo aad iyaga u dhoofinayno on your computer ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Notes helay halkan ma aha oo kaliya kuwa hadda aad iPhone, iPad ama iPod taabto, laakiin sidoo kale kuwa kuwa tirtiray. Wondershare Dr.Fone Kaa caawin kara si aad u ogaato macluumaadka dhawaan la tirtiro ama laga badiyay halkan.
Fiiro gaar ah: Wondershare Dr.Fone sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad Macdan aad gurmad Lugood, dhammaan qalabka macruufka haddii aad leedahay mid ka mid ah. Just sameeyo hab kabashada ee ka soo kabsado Lugood ee kaabta File ah.